सेरोफेरो : अभिभावकलाई बालसाहित्य
राजधानीको थापाथलीमा चलेको पुस्तक बिक्रिकक्ष । एक आमा आफ्नो त्यस्तै ९ वर्षे छोरा बल्ल तल्ल मनाउने प्रयासमा थिइन्, नेपाली बाल पुस्तक किन्नको लागि । उनको हातमा छोराले नै छानेका तीन अंग्रेजी बालपुस्तक पहिल्यै थिए । बजारमा के कस्ता पुस्तक आएका छन् ? जान्नका लागि केही घण्टाअघि देखि ¥याकहरू चाहर्दै गरेको मेरो ध्यान त्यो दृश्यले खिच्यो । आखिरीमा एक मात्र नेपाली बाल पुस्तक जबरजस्ती किनेर उनी छोरासहित बाहिरिइन् । उनीहरू गएपछि मेरा आँखामा पुस्तक कम प्रश्नहरू बढी नाँच्न थाले । किन त्यो बालकलाई नेपाली पुस्तक मन परेन ? के हामीले मन छुने सिर्जना पस्कन सकेनौं ? कि अभिभावकले नै नेपाली बालसाहित्यलाई बुझ्न सकेनन् वा छोराछोरीलाई बुझाउन् सकेनन् ? प्रकाशन गृहहरूको लगानीमा कमजोरी रह्यो कि ? यी प्रश्नहरूबारे छलफलको ढोका उघार्ने प्रयत्न यहाँ गर्नेछु ।
हामी कस्ता लेखक
चालिसको दशक । दिदी र दाइ कक्षा चढेपछि । किताबको गाता झरेपछि मात्र मेरो हातमा स्कुले पाठ्यपुस्तक पर्थे । बाल साहित्य भनौ वा विश्व विज्ञान । हाम्रा निम्ति ति सबथोक थिए । पछिल्लो एक दशकमा भने बालसाहित्यमा पुस्तकको संख्या ह्वात्त बढ्यो । अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढी संख्यामा प्रकाशित भैसकेका बाल पुस्तकमध्ये प्राथमिक तहका चित्र कथाको संख्या बढी छन् । माथिल्लो कक्षाका लागि उपन्यास र च्याप्टर बुक कम छन् । मातृभाषाका पुस्तक नगण्य छन् ।
बाल शिक्षामा कार्यरत ‘रुम टु रिड’ले संस्थालाई प्राप्त २ हजार हाराहारीका बाल साहित्यका पुस्तकमाथि एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन अनुसार कुल पुस्तकमध्ये स्वैरकल्पनामा ३४ प्रतिशत र गैर आख्यानमा ३२ प्रतिशत पुस्तक प्रकाशित रैछन् । २८ प्रतिशत लोककथाका अनि एक प्रतिशत मात्र विज्ञानका रहेछन् । विज्ञानका कथाले बाल मनमा नयाँ खोजी गर्न भोक जगाउँछ । ‘प्रयोग र प्रमाणमा’ विश्वास गर्ने विज्ञानका विषयमा लेखकका कलम कम चलेको छ । ह्युमर तथा एडभेन्चरस् विधाको हातल नि उस्तै छ । हामी अर्तिउपदेशका कथामा बढी रुमलियांैकि भन्ने प्रश्न यस नतिजाले उब्जाउँछ ।
कहिले काही फर्केर हेर्छु । मेरा पुस्तकमा पनि कमजोरीहरू छन् । रुम टु रिडबाटै केहि वर्षअघि माछा र बकुल्ला पुस्तक प्रकाशित भयो । कसरी माछाहरू बकुल्लाबाट बच्न सफल भए भन्ने यसमा चित्रकथा छ । थोरै विज्ञान, थोरै स्वरैकल्पनाको समिश्रण रहेको कथाको अन्त्यमा माछाहरूको जित हुन्छ । जितेपछि उनीहरूले बकुल्लाहरूको प्वाँख काटिदिन्छन् । ऐले लाग्छ, मैले किन कथाबाट बालबालिकामा प्रतिशोध सिकाएँ ? पराजितमाथि यस्तो व्यवहार सहि हुँदै होइन् । मानौ, विद्यालयमा दौड जितेकाले हारेको साथीको सर्ट च्यातिदिँदा उसको मनमा के गुज्रेला ? यसैले हामीले ‘कति कृति लेख्यौं भन्दा पनि कस्ता कृति लेख्यौं’ले बढी महत्व राख्छ । हरेक कमजोरी परिमार्जन गर्ने तथा नव सिर्जना नयाँ शिराबाट सुरूगर्ने हुटहुटी जागिरहनु नै असली लेखक हुनु हो ।
मध्यप्रदेश भारतको एक कुनामा आधार बनाएर तयार पारिएको पुस्तक ‘द जंगल बुक’ ले विश्वको ध्यान खिच्यो । हाम्रो देशमा पनि सर्लाही देखि सोलुखुम्बु अनि जनकपुर देखि जाँजरकोटसम्म कथाको कमि त पक्कै छैन । लाग्ला हाम्रो भाषा विश्वव्यापी भएन । सिन्ड्रेला, स्नो ह्वाइट लेख्ने ग्रिम्स ब्रदरले ‘परिका कथाहरू’ सुरुमा जर्मन भाषामा जम्मा पारेका थिए । द इम्पेरियर्स न्यु क्लोथ लेख्ने ह्यान्स क्रिष्चियन एन्डर्सनले यो पुस्तक डेनिस भाषामा लेखेका थिए । उनीहरूका पुस्तकहरू पनि विश्वव्यापी भए । यी सबै कथाहरूमा एउटै समानता छ, ‘मानविय संवेदना’ । संसारको सबै भन्दा ठूलो भाषा नै यहि हो । यहि सम्वेदनाको चाबीले पुस्तक बिक्रि कक्षमा भेटिएको बाबु जस्ता नयाँ पुस्ताको मनको ढोका खोल्नु नेपाली बालसाहित्य सर्जकका निम्ती अवसर र चुनौती दुबै हुन् । अवसर अंगाल्न अनि चुनौती सामाना गर्न भोलीका दिनमा हामी कस्ता लेखक बन्ने ? यि प्रश्नको उत्तर खोज्न, हामीले आफ्नै अनुहार पनि ऐनामा हेर्नु पर्छ ।
हामी कस्ता अभिभावक
छोराछोरीलाई पुस्तकालय लगेर किताब छान्न सघाउने माथिकी आमा जस्ता अभिभावक हामी माझ कम छन् । मध्यम र निम्न बर्गियको बर्चस्व छ । पुस्तक गन्नु भन्दा पेट भर्नु उनीहरूको मुल प्राथमिकता हो । उनीहरू मध्ये पनि थोरै छन् जसले पुस्तक किन्ने सोच्छन् । तर पचासौं पटक सोच्छन्, ‘केटाकेटिका लागि किताब किन किन्ने ?’ यहि प्रश्नको उत्तर हाम्रा पुस्तकहरूले धित मर्ने गरि दिन नसकेको तितो यर्थाथ हो ।
मार्था क्रिपेनको ‘द भ्यालु अफ चिल्ड्रेन लिटरेचर’ लेखका अनुसार बाल साहित्यले बालबालिकालाई सहित्यका बारेमा रुची बढाउन मात्र नभई सम्बन्धीत विषयमा आफ्नो धारण विकास गर्ने मौका दिन्छ । पुस्तकले उनीहरूलाई आफु र अरुको समाज अनि संस्कृतिको बारेमा सिक्ने र बुझ्ने बाटो खुलाइदिन्छ । ंसंस्कृतीहरूको बारेमा सकारात्मक धारणको विकास गर्नु बालबालिकाको व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकासको लागि निक्कै महत्वपुर्ण छ । अनओटा रिडिङ जर्नलमा प्रकाशित क्रिपेनको यो लेखमा बालसाहित्यले मनोरञ्जनसँगै बालबालिकामा संवेदनशिलता तथा नैतिकताको विकास गर्न सघाउने कुरा उल्लेख छ । यी क्षमताहरू उनीहरूले साहित्यका पात्रहरूबाट प्रभावित भएर नजानिँदो रुपले सिकिरहेका हुन्छन् ।
हामीसँग सन्तानले पढेनन्, नेपाली जानेनन् भन्ने गुनासोको भारी मात्र ठूलो हुन्छ । के हामीले छोराछोरीका निम्ति पुस्तक पढेर सुनाएका छौं ? कसरी पढेर सुनाएका छौं ? पढेपछि सम्बन्धीत विषयमा छलफल गरेका छौं ? यसमा पनि घोत्लिनु पर्छ । बच्चाहरूले नेपाली भाषामा चासो नराख्नुमा हामी अभिभावक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौं । एक प्लेट मःम भन्दा कम पैसाको नेपाली बाल पुस्तक किन्न हाम्लाई ज्वोरो आउछ । अन्य विधा र बाल साहित्यका पुस्तक बीचको भिन्नताका बारेमा बेलायती उपन्यासकार रोल्ड डालको भनाई यतिबेला सम्झनु उपयुक्त हुन्छ । उनका अनुसार बालबालिकाले एउटै पुस्तक दोहो¥याइ तेह¥याइ पढ्नु बाल साहित्यको सुन्दर पक्ष हो । उनीहरू धेरै पटक एउटै कृतिमा रमाउन सक्छन् । यसरी एकै खर्चमा बाल मनलाई धेरै पटक कल्पनाको संसारमा सयर गराउने पुस्तकमा लगानी गर्न चुकचुकाउने हामी कस्ता अभिभावक ?
हुन त पुस्तक किनेर दिँदैमा अभिभावकको कर्तव्य सकिँदैन । बुझ्नु पर्छ, राम्रा बाल पुस्तकले सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिँदैन । बरु बालबालिकाको मनमा प्रश्नहरू उब्जाउँछन् । उत्तर खोज्दै गर्दा अभिभावक र सन्तान बीच छलफलको ढोका उघारिन्छ । उदाहरण मानौं, एक बाल पुस्तकको एउटा पृष्ठमा ‘डम्म हुस्सुका बीच तराईको एउटा घर छ । घरअघि एउटा सानी नानी छिन् । नानीको काखमा सानो पाठी छे । पाठीले स्वेटर लगाएकी छे ।’ यो एउटा चित्रले बाल मस्तिस्कमा सयौं प्रश्न उब्जाउन सक्छ । नानीको काखमा के होला ? बाख्राको पाठीले पनि स्वेटर लगाउछे र ? कसले लगाइदियो ? यो ठाउँ कहाँ हो ? तराई भनेको के हो ? यस्तै यस्तै । मात्र एक चित्रबाट जन्मेको छलफलले बाल मस्तिस्कमा हिमालदेखि तराइसम्म फैलिएको नेपालको विशाल नक्सा कोर्दिन सक्छ । थेप्चो नाक र राता गाला देख्दैमा ‘भोटे’ अनि कालो अनुहार देख्दैमा ‘धोती’ भन्न सिकाउने हाम्रो सामाजिक सोचबाट थोरै बाहिर निकालेर ‘नेपाल के हो र नेपाली को हो ?’ सम्म पनि बुझाउन सकिन्छ । मोबाइलको साटो पुस्तक कै सहि यसले उनीहरूलाई नयाँ संसारबारे सोच्न र बुझ्न त मद्दत गर्छ । संसार बुझ्ने यो यात्रामा उनीहरूलाई समय दिएर सघाउनु । बालसाहित्यलाई नजिकबाट नियाल्नु, प्रश्न गर्नु र निखार्न सघाउनु सबै अभिभावकको कर्तव्य हो । किनकी बालसाहित्य, बालबालिकाको मात्र विषय हैन अभिभावकको पनि उत्तिकै हो ।
तपाई कस्तो प्रकाशक
हामी बाँच्नका लागि लेख्छौं कि लेख्नका लागि बाँच्छौं भन्ने प्रश्न अरु साहित्य जस्तै बाल साहित्यमा ठूलो छ । ‘अब कस्ता पुस्तकहरू लेखिनु पर्छ ?’ केहि हप्ताअघि ‘रुम टु रिड’ले यस विषयमा राजधानीमा छलफल डाकेको थियो । जम्मा भएका दश लेखकहरू कोही विद्यालय छुट्टि लिएर आएका थिए, कोही कार्यलयबाट भागेर । खासमा घरको अन्नपानी आउने ठाउँलाई केहि बेर बुझो लगाएर गएका थिए । एउटा बाल पुस्तक बजारमा आउनु अघि लेखकले धेरै ठाउँमा यस्ता बुझो लगाएका हुन्छन् जसलाई लेखकले मात्रै राम्ररी बुझ्न सक्छन् ।
तीन वर्षअघिको कुरा । म बेरोजगार थिएँ । एक प्रकाशन गृहमा मैले पुस्तकका निम्ति कथा बुझाएँ । ‘प्रक्रियामा जानुअघि छलफल गरौं है’ भनेको पनि थिएँ । केहि महिनासम्म थाहापत्तो भएन । धेरैपछि फोन गर्दा ‘चित्र बन्दैछ चाँडै प्रेसमा जान्छ’ भन्ने खबर आयो । ‘मैले लेखकको रूपमा के पाउने ?’ कुनै सम्झौता भएको थिएन । यहि प्रश्न राख्दा, उनीहरूले संस्थाको नियम सुनाए, ‘पुस्तक छापे बापत पाँच वटा पुस्तक अनि ५ हजारमा ट्याक्स काटेर जम्माजम्मी ४२ सय ५० रूपैयाँ पाउनु हुनेछ ।’
काठमाडौंको कहलिएको एउटा प्रकाशन गृहले बालसाहित्य सर्जकलाई गर्ने व्यवहारको एक उदाहरण हो यो । आफ्नो रचना छोराछोरी जस्तै प्यारो हुन्छ सर्जकको लागि । आर्थिक पक्ष त टाढाको कुरा, आत्मसम्मान पहिला आउछ । मौखिक नै किन नहोस्, स्विकृती वा सम्झौता बिना नै पुस्तकलाई छाप्ने प्रक्रियामा लैजानु सर्जकको ठूलो अपमान हो । मैले तत्कालै कथा फिर्ता लिएँ । जुनिभर पुनः छाप्न र बेच्न पाइने एउटा पुस्तकको लागि सिर्जेको सिर्जना थियो त्यो । त्यसबापत लेखकले आर्थिक रूपले पाउने त्यत्ती नै हो भने बाल साहित्यकार किन लेख्नका लागि बाँच्छ ? यद्यपी सबै तिर अवस्था उस्तै भने छैन । उमेर र कक्षा अनुसारका पुस्तकहरूको प्रकाशन गर्ने । डिजाइन, चित्र अनि मार्केटिङमा मेहनत गर्ने । अन्य केहि प्रकाशकहरूले यस्ता नयाँ अभ्यास पनि सुरु गरेका छन् । पुस्तक बिक्रेताबाट पैसा सजिलै नउठ्ने बाध्यता पनि छ प्रकाशकका । तै पनि केहि वर्ष यता रोयल्टि वा एकमुष्ठै भएपनि थोरै राम्रो रकम जुर्न थालेको छ बालसाहित्यमा । यसले ‘लेख्नको लागि बाँच्न’ सर्जकहरूलाई प्रेरित गरेको छ । लेखक, प्रकाशक र अभिभावक सबैले आफ्ना कमिकमजोरी निखार्नु नै बालसाहित्यलाई माथि उठाउने दह्रिलो काँध हो । यसो भएमा मात्र माथिको पुस्तक बिक्रि कक्षमा भेटिएको सानो बाबु लगायत आम भाइबहिनीले नेपाली बाल पुस्तक आफै खोजी खोजी पढ्न थाल्ने छन् ।
हिजो जहाज दुर्घटनाको समाचार थाहा पाए पछि निक्कै खल्लो लाग्यो । नेपाल वायुसेवा निगमको ट्वीनअटर जहाज हो भन्ने थाहा पाए पछि मैले आफूसँ...
किन हुर्किनुपर्छ बालसाहित्य? प्रश्न एउटा हो तर यसका उत्तर अनेक हुन सक्छन्। बालबालिकाको कल्पनाशीलता बढाउन, पढ्ने बानी बसाउन, समाज र स...
- भवसागर घिमिरे ‘ हिमालै चुली त्यो पारी नि पट्टी गाइमर्यो रोगैले रक्सीको पुइनी दाजु र नि बुइनी भेट भयो जोगैले ’ भारतीय पूर्व ...
Blog Archive March 2020 (1) February 2020 (1) December 2019 (1) May 2019 (1) April 2019 (1) January 2019 (1) September 2018 (1) August 2018 (1) June 2018 (3) May 2018 (1) February 2018 (4) December 2017 (4) October 2017 (1) September 2017 (3) June 2017 (1) April 2017 (1) December 2016 (1) November 2016 (2) October 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (1) June 2016 (1) May 2016 (3) April 2016 (1) March 2016 (3) February 2016 (1) December 2015 (6) November 2015 (5) October 2015 (1) September 2015 (4) August 2015 (1) July 2015 (1) June 2015 (2) April 2015 (1) March 2015 (2) February 2015 (1) August 2014 (2) June 2014 (3) February 2014 (1) January 2014 (2) December 2013 (1) November 2013 (1) October 2013 (2) September 2013 (4) August 2013 (1) July 2013 (6) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (7) January 2013 (2) August 2012 (1) May 2012 (3) December 2011 (3) November 2011 (2) September 2011 (1) July 2011 (6) June 2011 (2) May 2011 (4) April 2011 (2) March 2011 (7) February 2011 (9) January 2011 (13) December 2010 (2) August 2010 (1) December 2009 (1) November 2009 (1) October 2009 (1) September 2009 (6) August 2009 (1) July 2009 (6) April 2009 (5) March 2009 (35)